Isilinganiso sokushintsha imali Euro (EUR) Ukuze Rand (ZAR) bukhoma ku-Forex exchange emakethe
Forex exchange rate olusha: 01/08/2021 12:44
Euro - Rand Intengo manje kwi Forex exchange emakethe ngesikhathi 01 August 2021
12:44:55 (Forex rate buyekeza 59 imizuzwana)
1 EUR = 17.33 ZAR
1 Euro kuya 17.33 Rand ekushintshanisweni kwe-Forex. Euro ku- Rand eshintsha njalo ngemizuzwana engama-30. Masinyane Euro kuya Rand. Inani le Euro kuya Rand manje nangezikhathi ezahlukahlukene.
Ishadi Forex Ukuhweba Rand ukuze Euro baphile 01 August 2021
Ishadi Forex Ukuhweba Euro Ukuze Rand siphile, 01 August 2021
Kuwebhusayithi yethu ungathola ishadi Euro kuya Rand isilinganiso sokushintshaniswa ku 01 August 2021. Euro kuya Rand kulula ukubukwa eshadini. Sebenzisa izinsizakusebenza eshadini ngokuthe ngqo Euro kuya Rand. Igrafu yesilinganiso sokushintsha ishintsha ngokuzenzakalelayo njalo ngemizuzwana engama-30.
Convert Euro Ukuze Rand Euro Ukuze Rand Isilinganiso sokushintsha imali Euro Ukuze Rand exchange rate umlando
Online ukuhweba Euro (EUR) ukuze Rand okwamanje
Njalo ngeminithi silandelela izinga lokushintshana. Amandla we Euro ( EUR) ku- Rand okwamanje. Isayithi libonisa itafula lokuthumela imizuzu eyi-10 ye Euro ku- Rand umzuzu ngamunye. Bona idatha yesilinganiso sokushintshana yemizuzu engu-10 etafuleni kuleli khasi.
17.33 17.33 17.33 17.33 17.33 17.33 17.33 17.33 17.33 17.33
Online ukuhweba Euro (EUR) ukuze Rand last Ukuhweba ihora
Sibonisa izinga lokushintshana kusuka ngehora kuya ehoreni. Izinguquko ku- Euro ( EUR) ku- Rand kulelihora. Ngehora lokushintshanisa kwezinga le Euro ku- Rand etafuleni amahora angama-10. Sinethebula lamanani emahoreni angu-10 wokugcina ukubukwa.
Online ukuhweba Euro (EUR) ukuze Rand mkhuba lanamuhla 01 August 2021
12:44 11:43 10:43 09:42 08:42 07:42 06:42 05:41 04:41 03:41